Soomaali / Ogeysiisyada cimilada
Xidhitaanka /Dib udhaca/waqtiga bixitaanka
Degmada Iskuulada742 , Sauk Rapids - Rice & Sartell, iyo Degmooyinka Iskuulada St . Stephen
Saddexda degmo ee ugu waaweyn ee Iskuulada degaanka metro ee Saint-Cloud ayaa markale dib u wada shaqeyn doona xagaagan ama wakhtiga qaboobaha ay jirto xaaladaha degdegga ah ee la xiriira cimilada. Dadaal badan oo lagu soo ururinayey warbixin ama macluumaadka cimilada saxda ah ee degmooyinka Iskuulada, Iskuulada degmada ayaa sii wadi doona ku tiirsaanaanta khubaraha Jaamacada Gobolka St. Cloud (meteorologists) ku takhasusay saadaasha xaga cimilada ama hawada. Macalimiinta ama profasoorada Jaamacadda ayaa siiya talooyin ku saabsan go'aanada xiritaanka Iskuulada ee degmooyinka.
Cimilada gobolka Minnesota Mararka qaarkood waxaa adag in la saadaaliyo; waxaa lagama maarmaan ah in waalidka ama masuulka u diyaar garoobaan xiritaanka iskuulkada, furitaanka, dib udhacayad, iyo bixitaanka waqti hore. Saddex degmooyinka Iskuulada dadweynuhu ee metro iyo Isku dubaridka nidaamyada qorshe ee Iskuulada ayaa si wanaagsan u hubinaya amniga caruurteena. Adeegyada cimilada Qaranka iyo hay'adaha kale ee oddoroska ayaa warbixinna soo saara kala duwan cimilada wakhtiga qaboobaha, iyadoo fiirsi ah, iyo digniin intaba . Waxaan u isticmaalnaa warbixintaan, iyo macluumaad kale oo ay weheliso xogta ay bixiyaan Jaamacada gobilka St-Cloud, si loo ogaado haddii ay jiraan xaalado cimilo ba’an keeni kara bilowga xilli danbe ah, maalin dhan in la joojiyo Iskuulka ama xiliga bixitaanka hore ee Iskuulka. Baraf daran, duufaano baraf sita, qabow aad u daran , iyo dabaylo xooggan ma aha kaliya kuwa keeni kara xaalad degdeg ah. Barafku wuxuu noqon karaa mid si siman khatar u ah. Mararka qaar lagayaabo qoraxdu ineey ka ifeyso hal dhinac, aragtideeda laga yaaba ineey hadana ku qarsoonto si fudud, ayna abuurikarto marxalad khahatar ah. Arday badbaada qabta iyo waalid kawarqaba.
Marxalad cimilo kasta oo deg deg ah, ujeedada ugu weyn waa in la bixiyo badbaado iyo jawiga nabdoon ee ardayda. Degmooyinka Iskuulada 742, Sauk Rapids-Rice iyo Sartel - St. Stephen ayaa waxay isticmaali doonaan isku dubridka qorshe ee la xiriira cimilada degdeg ah ee xiritaanka Iskuulada mar kale sannadkan. Tani waxay ka dhigan tahay in dugsiyada dawladda iyo kuwa kale dhammaan saddexda degmooyinka ay wada xirmi doonaan ( ama wada furananyaan ) sida uu dhigaayo isla jadwalki jiilaalki hore ee xaaladaha dega dega. Idaacadaha iyo adeegyada wararka ayaa la xiriiri doonaa iyagoo ku hadlaya magaca degmo kasta , laakiin dadka degaanka waa in ay aqoonsadaan in saddexda degmo ay ka wada shaqeeyaan oo ay kawada simanyihiin go’aanadaan.
Habraaca Xiritaanka Xaaladaha Deg dega ah
Saddexda kormeerayaasha goobta metro ayaa ku dadaali doona markasta in ay ku dhawaaqaan xidhitanka dugsiyada ama Iskuulada goor dambe bilaabanya saacadu markay tahay; 10:00 pm.
Ka hor habeenka cimilo ba'an ay jirto ama sida ugu dhakhsaha badan marka loo helo wixi macluumaad ah.
Marka xiritaanka degdeg ah uu jiro subaxdii ama bilowga xilli danbe waxaa loo baahan yahay,dadaal kasta in lasameyn iyo xiriir waxii go'aan ah saacadu markay tahay: 5:30 am aroornimo.
Haddii ay dhacdo in xili hore bixitaanku noqdo ama xiritaanka Iskuulada, dhammaan hawlaha iyo dhaqdhaqaaqyada ardayda, oo ay kamidyihiin KIDSTOP, fasalada Waxbarashada Bulshada , fasalada Early Childhood , fasallada Adult Basic Education (Waxbarshada dadka waaweyn ee asaasiga ah) ESL, iyo Area Learning Center (Xarunta waxbarasha), iygana majiri doonaan
Raadiyaha iyo Telefishinada Ogeysiisyada
Ogeysiisyada ku saabsan iskuulada xidhitaankooda , dib u furitaanka , ama hore u bixitaanka la xiriira Degmooyinka Iskuulada 742 , Sauk Rapids - Rice , iyo Iskuulada Sartell - St. Stephen ayaa waxaa laga soo deyn doonaa idaacadaha iyo TV-yadan soo socda.
WJON Radio 1240
WWJO Radio 98.1
KMXK Radio 94.9
KKSR Radio 96.7
KLZZ Radio 103.7
KXSS Radio 1390
KCLD Radio 104.7
KNSI Radio 1450
KZPK Radio 98.9
KCML Radio 99.9
KASM Radio 1150
KDDG Radio 105.5
WVAL Radio 800
WHMH Radio 101.7
KKJM Radio 92.9
KCFB Radio 91.5
KVSC Radio 88.1
WCCO Radio 830
WCCO TV Channel 4
KSTP TV Channel 5
KARE-11 TV Channel 11
KMSP-TV Channel 9
Intaa waxaa dheer warbaahinta raadiyaha iyo telefishinka, waxaa sidoo kale qaylodhaanka ama ogeysiiska cilmilada lagaga dhawaaqaa laanta warbaahinta boggooda interneedka St. Cloud Times ee ciwaankeedu yahay: www.sctimes.com. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa ama kadhageysan kartaa jaanalada waxbarashada deegaanka, jaanalka 187, bogga facebuuga Degmada 742 oo ciwaankiisu yahay: www.facebook.com/isd742.org , ama bogga interneetka ee Degmada 742 oo ciwaankiisu ah: www.isd742.org xiritaanka dambe ama warar ku saabsan bilowga xilliga dambe.=
Cimilada Qaboobaha iyo xaaladaha deg dega ah lama saadaalin karo, oo waxay ay dhici karaan waqti kasta. Ujeeddada qorshaha cimilada ee la xiriira xiritaanka ayaa ah mid lagu caawinayo waalidiinta ama masuuliyiinta iyo ardayda si ay ugu diyaargaroobaan xaaladaha deg degga ah iyo in la yareeyo saamayntooda. Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay u diyaar garoobaan xaaladaha degdeg ah ee xidhitaanka Iskuulka. Daryeelaha carruurta gaarka ah ayaa ladiyaarinayaa, taas oo loo isticmaali karo kaliye haddii ay dhacdo bilowga xilli danbe ah ee labilaabayo Iskuulka, hore ubixitaanka ardayda, ama Iskuulka oo laxiro xaalad deg deg ah oo jirta aawgeed. Ugu dambeyntii, waalidka ama mas'uulka waa inuu go'aanka ugu dambeeya garaa haddii ilmuhu uu dhiganayo Iskuuka wakhtiga lagu jiro jawi aad u daran.